अमेरिका छिर्ने क्रममा ५ दर्जन नेपाली जर्मनीमा पक्राउ - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार अमेरिका छिर्ने क्रममा ५ दर्जन नेपाली जर्मनीमा पक्राउ
काठमाडौंबाट दुबई, मस्को र मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका छिर्न खोज्ने झन्डै पाँच दर्जन नेपाली फ्र्यांकफर्ट विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन् । यही रुटबाट मेक्सिको पुगेका केही व्यक्तिलाई मेक्सिको प्रहरीले फ्र्यांकफर्ट डिपोर्ट गरेको थियो । अन्य केही भने मेक्सिको उड्ने तयारीमा थिए ।
मेक्सिकोबाट डिपोर्ट भएकाहरूलाई भने मस्को फिर्ता पठाउन लागिएको जर्मन सुरक्षा निकायले बताएको जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले जानकारी दिएका छन् । विमानस्थलको ट्रान्जिटस्थित प्रहरी सुरक्षा घेरामा रहेकाहरुका अनुसार उनीहरु त्यहाँ ६ दिनदेखि सुरक्षा घेरामा छन् । प्रहरी नियमानुसार अब दुई दिनभन्दा राख्दैन र उनीहरु अझै मेक्सिको जाने आसमा छन्।
जानकरी अनुसार आफन्तको विश्वासमा परेर उनीहरूले अमेरिका छिर्नका लागि जनही ३८ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए । राजदूत खड्काका अनुसार दूतावासले जर्मनीको सुरक्षा एजेन्सीसँग सम्पर्क गर्दा १८ जना नेपाली आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ । पक्राउ परेकामध्ये ६ जनासँग जापानको नक्कली भिसा भएकाले शंका लागेर समूहका सबैलाई नियन्त्रणमा लिइएको जर्मन सुरक्षा संस्थाले जानकारी दिएको खड्काले बताए ।
ती नेपालीहरुले आफूहरूमध्ये अधिकांशलाई आले थरका नेपाली दलालले दुई साताअघि काठमाडौंबाट दुबई (यूएई) उडाएका थिए । एक सातासम्म दुबईको एक होटलमा राखिएपछि उनीहरू आफैं टिकट काटेर मस्को (रुस) उडेका थिए । मस्को उड्ने प्रबन्ध भने एक पाकिस्तानी दलालले मिलाइदिएका हुन् ।
Previous articleओमान १ सय २१ रनमा अलआउट, सन्दीप र करणकाे ४–४ विकेट
Next articleथप रहस्यमय बन्दै संखुवासभा सामूहिक हत्याकाण्ड : थप ६ जना पक्राउ
यो साता बजारमा दुई वटा आईपीओ, कति भर्ने ?